कस्तो पुरुषसंग सम्बन्ध बनाउन चाहान्छन युवतीहरु ? यस्तो भन्छ अध्ययन ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/कस्तो पुरुषसंग सम्बन्ध बनाउन चाहान्छन युवतीहरु ? यस्तो भन्छ अध्ययन !
काठमाडौं ।एक अध्ययनले सुन्दरता भन्दा पनि सुगन्धले मानिसको शारी*रिक जीवनमा प्रभाव पार्ने तथ्य फेला पारेको छ। कसैलाई शारी*रिक सम्प*र्कका लागि आकर्षित गर्न पैसा, सुन्दरता तथा फिगर लगायत कुरा तपाईको सुगन्धको अगाडि सब बेकार हुन सक्छन् ।
भगवती माईको मन्दिरमा सुरुमा महिला चिच्चाएको आवाज सुनियो, त्यसपछि यसरी शीलामा पसिना आयो ( हेर्नुहोस् )